Manchester United oo la soo wareegtay Nemanja Matic - BBC News Somali
Manchester United oo la soo wareegtay Nemanja Matic
Kooxda Manchester United ayaa dhamaystirtay heshiiskii ay Chelsea kagala soo wareegaysay Nemanja Matic iyaga oo ka bixiyay 40 milyan oo gini, wuxuuna sixiixay qandaraas saddex sano ah.
Ciyaaryahanka dhexda ka dheela ee 28 jirka ah ayaa ah midkii saddexaad ee ay Manchester la soo wareegto xagaagan waxaana ka sii horreeyay Victor Lindelof oo ay naadiga Benfica ka soo siisteen 31 milyan oo gini, iyo Romelu Lukaku oo ay Everton ka soo siisteen 75 milyan oo gini.
Tababaraha kooxda Manchester ayaa Matic ku tilmaamay "nin ay wanaagsan tahay wadashaqayntiisu" uuna leeyahay wax kaste oo ay uga baahan yihiin ciyaartoyga sida daacadnimada, hamiga iyo in ay joogto tahay sida wanaagsan ee uu u ciyaaro.
Matic ayaa sheegay "in uu ku faraxsan yahay" in uu kooxda ku soo biiro wakhtigan "cajiibka ah".
Ciyaaryahankan reer Serbia ayaa intaas ku daray in ay ahayd fursad uusan diidi karin in uu markale la shaqeeyo tababare Jose Mourinho".
"Waxkhi wanaagsan ayaan ku soo qaatay kooxda Chelsea waxaana jeclahay in aan taageeraday ii muujiyeen uga mahadceliyo kooxda iyo taageereyaashaba. Ma sugi karo in aan la kulmo ciyaartoyda kooxdayda cusub iyo in aan tababarka la billaabo.